Vaovao - Nahazo mari-boninahitra "Fujian Advanced Private Enterprise in Fighting COVID-19" ny COATI
Vao tsy ela akory izay, ny federasionan'ny indostria sy varotra faritany any Fujian ary ny Fikambananan'ny fampiroboroboana ny faritany Fujian dia namoaka ny "Fampandrenesana fiderana ny federasiona indostrialy sy ny varotra faritany Fujian momba ny fanekena ireo orinasa tsy miankina mandroso sy ny efitranon'ny varotra amin'ny ady amin'ny COVID-19 . " Ny COATI dia manatanteraka mavitrika ny andraikitra ara-tsosialy ao amin'ny orinasa, mitolona handray anjara amin'ny hetsika fanoherana ny valanaretina, mampihatra ny fiahiana ara-tsosialy sy fiantrana ary nahazo ny anaram-boninahitra "Fujian Federation of Industrial and Commerce Advanced Private Enterprise in Fighting the New Coronary Pneumonia Epidemique".
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, karazana coronavirus vaovao tampoka sy nandrahona no nandrava an'i Wuhan, Hubei, ary namakivaky ny firenena. Natomboka tamin'ny fomba rehetra ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina mifandraika amin'ny ain'ny olona sy ny fahasalaman'ny vahoaka. Ekipa mpitsabo sy andiana fitaovam-pitsaboana sy fiainana velona nivory nanerana ny firenena nankany Hubei sy Wuhan.
Amin'ity ady sniper ity hisorohana ny fisorohana ny valanaretina sy ny fifehezana ny olon'ny firenena iray manontolo dia tsy teo ny marika COATI anay. Fantatro fa na dia tsy misy vovo-basy aza amin'ity ady ity, ny famatsiana fitaovana dia zava-dehibe kokoa noho ny "fitaovam-piadiana" rehetra. Mba hanampiana ireo mpiray tanindrazana Hubei miady amin'ny valan'aretina, ny marika COATI anay dia nanapa-kevitra ny hanome fitaovana fiarovana 3.86 tapitrisa hanampiana ireo mpiaradia lohalaharana amin'ny ady amin'ny valanaretina handresy ity ady amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina ity.
Anisan'izy ireo, mamaly am-pahavitrihana ny antso nasionaly hanohanana ny tanànan'i Yichang, izahay COATI miaraka amin'ny Komitin'ny Ligin'ny Tanora Longhai dia nanolotra fitaovana fisorohana valan'aretina 860.000 yuan ho an'ny Tanànan'i Yichang, faritanin'i Hubei; Ary nanolotra fitaovana fisorohana valanaretina mitentina 2 tapitrisa yuan ho an'ny tanànan'i Wuhan, faritanin'i Hubei tamin'ny alàlan'ny Federasiona malala-tanana Wuchang; Tamin'ny alàlan'ny Fikambanan'ny Vokovoko Mena Huanggang, dia nanolotra fitaovana manohitra ny valan'aretina 1 tapitrisa yuan ho an'ny tanànan'i Huanggang, faritanin'i Hubei, ary nandefa mpitsabo mpanara-maso marika COATI, detergent fanasan-doha amin'ny bakteria, shampoo ary gel mando ho an'ny mpiasa voalohany amin'ny valan'aretina. Ampio handresy ity ady amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina ity.
Amin'izao toe-javatra misy ny valan'aretina izao dia miankina amin'ny soroka ny andraikitra. Ny marika fikarakarana zazakely Little Raccoon dia namaly tamim-pahavitrihana ny antson'ny Komitin'ny Longhai Municipal Committee an'ny United United Work Department, ny Federasiona Monisipaly misahana ny Indostria sy ny Varotra (Chambre de Commerce Général) ary ny Federasiona Kaomininalin'ny Sinoa any ivelany mba hanome fitaovana miady amin'ny valan'aretina 100. toy ny thermometre infrared mankany amin'ny Longhai Center for Control and Prevention of Disease. , Ny sandany rehetra dia 43000 yuan; Tavoahangy 630 misy otrikaretina alikaola 75% ary fanadio tanana enti-mitondra bakteria miisa 600 no natolotra ho an'ny Sekoly Lehibe Shancheng Central amin'ny alàlan'ny Nanjing Red Cross Society.
Andriamatoa He Zhiyong, tale jeneralin'ny orinasa Menggulan any amin'ny faritanin'i Fujian, dia nanatrika ny lanonana fanomezana
Nandray anjara tamin'ny lanonana fanomezana ny solontenan'ny orinasa Fujian Menguerlain
Hatramin'ny nivoahan'ny valan'aretina pnemonia satro-boninahitra vaovao, ny olona na aiza na aiza dia nitaky bebe kokoa ny vokatra fiarovana ara-pitsaboana toy ny sarontava, otrikaretina ary fitaovana fisorohana valanaretina. Ny marika nasionaly Little Raccoon dia miatrika izany. Raha ny fiantohana ny fiarovana ny mpiasa amin'ny lafiny rehetra dia notarihinay tamim-pahatokiana hiverina ny mpiasa rehetra. Mamokatra haingana ny vokatra fikarakarana bakteria toy ny raccoon kely miady amin'ny bakteria ary tsy misy fanasan-tanana, famonoana otrikaretina ao an-trano, famonoana otrikaina 75%, famaohana toaka 75%, sns., Hanampiana ny fampandrosoana ny fisorohana ny valanaretina sy ny asa fanoherana ny valan'aretina, ary mampiasa vola mavitrika amin'ny fananganana tsipika famokarana saron-tava fiarovana, tsy maintsy atao ny manao iraka famokarana sarontava sy manohana ny asa fisorohana valanaretina.
Ny mari-pankasitrahana ny "Advanced Private Enterprise in the Fight against the New Coronary Pneumonia in Fujian Province" tamin'ity indray mitoraka ity dia fanekena ny andraikitra ara-tsosialy amin'ny fikarakaran-jaza zazakely raccoon. Ny fikolokoloana zazakely raccoon dia hankamamiam-boninahitra ary hanao ezaka maharitra mba hampiroboroboana bebe kokoa ny fanahin'ny orinasa sy ny fianakaviana ary ny firenena. Mandrosoa fivoarana avo lenta amin'ny lafiny rehetra, mihoatra ny fanaovana fandraisana anjara vaovao sy lehibe kokoa!
Fanomezana fanomezana ho an'ny Spa Spa, Fanomezana fanomezana spa fandroana spaoro, Fizera fandroana, Napetraka fanomezana Krismasy, Fitaovana fanomezana Spa Bath, Fanomezana Spa Bath,